Örebro: 3 Dhalinyaro oo ku dhimatay Shil Gaari Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaÖrebro: 3 Dhalinyaro oo ku dhimatay Shil Gaari
Örebro: 3 Dhalinyaro oo ku dhimatay Shil Gaari
April 26, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden 0
Sida laga soo xigtay Boolisla Örebro waxaa Shil naxdin leh uu la dhacay wadada 205 ee u dhaxeysa Karlskoga iyo Degerfors Shilkaasi oo sababay xawaaraha gaariga oo aad u sareeyay.
Shilka kadib Booliska ayaa gaaray goobta iyadoo mid kamid ah gawaarida uu goobta ku gubtay Shilka kadib sida uu booliska uu xaqiijiyay.
3 kamid ah afar dhalinyaro oo ii shilka ku dhacay ayaa goobta ku dhintay Halka mid kalena uu dhaawac daran kasoo gaaray kaasi oo hada la dabiibayo.
Wadada 205 ee u dhaxeysa Karlskoga iyo Degerfors ayaa la xiray iyadoo booliska ay bilaabeen baaritaan Hordhac ah oo ku aadan waxa keenay Shilka intaasi la eg xili wali aan lasoo badhigin halka ay asal ahaan kasoo jeedaan Dadkan.
Wadamada Yurub badankooda waxaa ka dhaca Shilka gawaarida waana meesha kaliya ee sababta dhimashada wadanka iyadoo sanad walbo lasoo saaro tirada Dadka ku dhinta shilalka.